ကောင်းကင်ကို: 02/01/2013 - 03/01/2013
Posted by Kaung Kin Ko at 4:27 PM3comments:
ကိုယ်တိုင်ကျတော့ သူများသတ်ပြီးသား အသားကိုစားပြီး … "သားသတ်သမားတွေ၊ တံငါတွေ၊ မွေးမြူရေးသမားတွေ"ဟာ အကုသိုလ်ကောင်တွေ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး တချို့ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့လို အလုပ်တွေကို သမ္မာအာဇီဝ မဖြစ်ဘူးလို့ သတ်မှတ်တတ်ကြတယ်။
ကိုယ်ကျတော့ သူတို့သတ်ထားတဲ့ အသားစားမယ်၊ အကုသိုလ်ကိုတော့ သတ်တဲ့သူ ယူလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးက တကိုယ်ကောင်းဆန်လွန်းတဲ့ စိတ်မျိုးလို့ ထင်တယ်။ အဲဒီ့လိုလူ တချို့က ပြောကြပြန်တယ်။ အသားဖြစ်ဖြစ် အသီးအရွက်ဖြစ်ဖြစ် အစားအစာကို တပ်မက်စိတ် မပါဘဲ စားရင် ပြီးရောတဲ့။ အကုသိုလ် မဖြစ်ဘူးတဲ့။ အဲဒါဆိုလည်း ဆီတွေဘာတွေ၊ တခြားအရသာတွေ ထည့်မနေဘဲ၊ ဟင်းတွေကို အရသာ အမျိုးမျိုးချက်မနေဘဲ ရေလုံပြုတ် စားကြရောပေါ့။ အချိန်ကုန်တောင် သက်သာဦးမယ်လေ။ ကျနော့်အမြင်တော့ သဘာဝကြီးကတောင် သစ်သီးဝလံလို စားစရာတွေမှာ အရသာ မျိုးစုံ ပေးထားတာပဲ။ ဒီတော့ အစားအစာကို တပ်မက်ခြင်းတွေ၊ အရသာခံခြင်းတွေဟာ အန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့ အဆင့်အထိ တပ်မက်တာမျိုး မဟုတ်ရင် အပြစ်ကင်းတဲ့ ခံစားမှုမျိုး၊ သဘာဝကျတဲ့ စည်းစိမ်မျိုးလို့ပဲ ကျနော်တော့ ခံယူတယ်။
တိရိစ္ဆာန် တွေကို စားဖို့ သတ်တာကိုကျတော့ အပြစ်ပြော၊ ကိုယ်တိုင်ကျတော့လည်း သက်သတ်လွတ် မစားသူ တယောက်ကို “အဲဒါက ရှေ့နောက်မညီဘူး၊ မင်း…သတ္တဝါတွေကို သနားရင် အသား မစားဘဲ နေပေါ့။ ဒါဆို သတ္တဝါတွေ အရေအတွက် နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ချမ်းသာရာ ရတာပေါ့” လို့ သွားပြောလိုက်ရင် သူတို့ ပြန်ပြောလေ့ ရှိတာက “ငါတယောက်တည်း အသား မစားဘဲ နေလည်း တကမ္ဘာလုံးက အသားစားနေမှာပဲ။ ဒီတော့ သားသတ်သမားတွေလည်း ရှိနေမှာပဲ။ ငါတယောက်တည်း သက်သက်လွတ် စားရုံနဲ့တော့ မထူးဘူး” လို့ ပြန်ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါဆိုရင် ပြန်မေးချင်တာက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်တို့၊ သီလတို့ ဆိုတာဟာ တကမ္ဘာလုံး လုပ်ခြင်း မလုပ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်လို့လား။ ဥပမာ…တတိုင်းပြည်လုံး ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်တွေ ခိုးနေကြရင် ငါမခိုးလည်း တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ ထူးမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး လိုက်ခိုးတော့မှာလား? တကမ္ဘာလုံး ခိုးရင် လိုက်ခိုးတော့မှာလား? Moral legitimacy ဆိုတာ သူများလုပ်ခြင်း မလုပ်ခြင်း၊ တကမ္ဘာလုံး လုပ်ခြင်း မလုပ်ခြင်းနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကိန်းဂဏန်း အရေအတွက်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ သက်သတ်လွတ် သမားက သားငါးသတ်ဖြတ်သူကို ဝေဖန်တာမျိုးဆိုရင်တော့ သဘာဝ ကျပါတယ်။ အဲဒီ့လို သက်သတ်လွတ်သမားတွေကိုလည်း အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ရှေ့နောက်မညီသူတွေက ဒေဝဒတ် ဝါဒီတွေဆိုပြီး မညှာမတာ သမုတ်ကြပြန်တယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တည်ထောင်တဲ့ မာ့ခ်ဇူကာဘတ် ကတော့ ပြောင်းပြန်။ တတ်နိုင်သမျှ သက်သက်လွတ် စားဖြစ်အောင် ကြိုးစားတဲ့ အနေနဲ့ ကိုင်တိုင်ကိုယ်ကျ သတ်ထားတဲ့ အသားကိုမှ စားသတဲ့။ သူ့ ဒဿနကတော့ ဒီလို။ လူတွေဟာ အသားကိုတော့ စားကြပေမဲ့ ကိုယ်တိုင် သတ်ခဲ့ကြရတာ မဟုတ်တော့ အဲဒီ့ အသားစားတဲ့ အချိန်မှာ သတ္တဝါတကောင် သေရရှာပြီ ဆိုတဲ့အတွေးကို၊ သနားစရာမြင်ကွင်းတွေကို လျစ်လျူရှုလိုက်ဖို့၊ မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ လွယ်တယ်တဲ့။ အဲလို အလွယ်တကူ မေ့ပစ်၊ လျစ်လျူရှုပစ်လိုက်တာဟာ တာဝန်မဲ့တာလို့ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်က ယူဆသတဲ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်သတ်တဲ့ အသားကိုပဲ စားတော့တယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မြင်နေရရင် တိရစ္ဆာန်ကြီးကြီး တကောင်လောက်ကိုတောင် သွေးထွက်သံယို မသတ်ချင်ပေမဲ့၊ အနိဌာရုံ မြင်ကွင်းတွေကို မမြင်ရဘူးဆိုရင် လူတသောင်းလောက်ကို သေစေမယ့် အမိန့်မျိုး ချလိုက်ရရင်တောင် အိပ်ရေးမပျက်ကြဘူး မဟုတ်လား။
သတ္တဝါတွေကို စားဖို့ သတ်ခြင်းကို သက်သတ်လွတ် စားသူတွေက ဝေဖန် ထောက်ပြလာရင်တော့ သူ့ဟာနဲ့သူ ရှေ့နောက်ညီတာမျို့ လက်ခံပါတယ်။ ဒါတောင်မှ ကိုယ်တိုင်တစုံတခု လိုချင်လို့၊ ကုသိုလ်လိုချင်လို့၊ ဒါမှမဟုတ် အကုသိုလ်ဖြစ်မှာကို ကြောက်လို့ သက်သတ်လွတ်စား တာမျိုးထက် သတ္တဝါတွေကို သနားတဲ့စိတ်သက်သက်နဲ့ သက်သတ်လွတ်စားတာမျိုးကိုပဲ ပိုလေးစားပါတယ်။ သက်သတ်လွတ် စားခြင်းဟာ ဘာသာရေးကြောင့် မဟုတ်ဘဲ “လူတွေဟာ အသိဥာဏ် အကြီးဆုံးဖြစ်လို့ ကိုယ့်လောက် အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေကို ညှာသင့်တယ်” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ ဆိုရင်ပေါ့။
Posted by Kaung Kin Ko at 11:35 AM 8 comments:
Rapသီချင်း တပုဒ် လောက်နဲ့
Posted by Kaung Kin Ko at 3:28 PM4comments:
Labels: My poems, သရော်စာများ, အတွေး
ခေတ်မောင်းဂျာနယ် အတွဲ (၂) အမှတ် (၁) ထဲမှာ ကျနော် ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ခေတ်မောင်း ဂျာနယ် တစောင်လုံးကို ဒီမှာ download လုပ်လို့ ရပါတယ်။
အယူအဆ ရေးရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ရင် သည်းခံခြင်းဟာ ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ လူတော်တော်များများ တွေးကြပါတယ်။ သူတို့က ပြောပါလိမ့်မယ်။ ကွဲပြားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ကွဲပြားတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေ ရှိနေတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ဒါကြောင့်မို့ “ငါတို့ဟာမှ ငါတို့ဟာ၊ ငါတို့ဟာသာလျှင် အမှန်တရား” လို့ လှေနံဓါးထစ် မယူဆသင့်ကြောင်း ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် “ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို သည်းခံကြ” ဆိုပြီး ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့အယူအဆဟာလည်း အခြေအနေ တော်တော်များများအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့အကြိုက်၊ ကိုယ့်အကြိုက် အလျောက် တကိုယ်ရည် ရွေးချယ်ရမယ့် တချို့ ကိစ္စတွေမှာ မတူညီမှုတွေကို ယေဘုယျအားဖြင့် သည်းခံရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အယူအဆ ကွဲပြားမှု မှန်သမျှကို အမြဲတမ်း အခါခပ်သိမ်း သည်းခံရမယ် ဆိုရင်တော့ မသင့်လျော်ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း ကောင်းကျိုးအတွက် အားလုံးလက်ခံသင့်တဲ့ စံနှုန်းတွေ၊ တရားတွေ ရှိနေလို့ပါပဲ။
အယူအဆရေးရာ မတူညီမှု မှန်သမျှတိုင်းကို အမြဲတမ်း သည်းခံမယ် ဆိုတဲ့ သူတွေဟာလည်း တကယ်တော့ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ ချွတ်စွပ်တူတဲ့ အဖြေလွှာ နှစ်ခုကို အမှတ်နှစ်မျိုးပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက လူတွေရဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ အဖြေလွှာ [မကောင်းတဲ့ အယူအဆ တခုခု] ကိုတော့ “ရှုံး” (သို့မဟုတ်) “မှားယွင်း” လို့ သတ်မှတ်ထားချိန်မှာ တခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက ပုံစံတူ ခပ်ညံ့ညံ့ အဖြေလွှာ [ပုံစံတူ မကောင်းတဲ့ အယူအဆ တခုခု] ကိုတော့ “အောင်” (သို့မဟုတ်) “မှန်ကန်” လို့ လိုက်လျောမှုနဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားလို့ပါ။
ဥပမာ တခု ပေးချင်ပါတယ်။ အရှုံးပေးရင် နှလုံးအေးတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို လက်ကိုင်ထားသူ တယောက် ရှိတယ် ဆိုပါစို့။ သူက သူ့ဘာသာသူတော့ အထိုက်အလျောက် အမြင်ကျယ်တယ်။ သူ့မှာ လူမျိုးရေး အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှု ဘာညာ မရှိဘူး ဆိုပါစို့။ သူကိုယ်တိုင်တော့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားခြင်းဟာ “မှားတယ်” လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် အဲလိုလုပ်ရပ်ကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး ဆိုပါစို့။ ဒါပေမဲ့ သူက အေးအေးဆေးဆေး သမား။ သူများကို ဆန့်ကျင်ပြောရမှာ အားနာတတ်တယ်၊ အမြဲတမ်း လိုက်လျော အလျှော့ပေးတတ်တယ်၊ လူတိုင်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေချင်တဲ့သူ ဆိုပါစို့။ သူ့မိတ်ဆွေ တယောက်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် Wall မှာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတာတွေ လာ share မယ်။ အဲဒီ့မိတ်ဆွေက ကိုယ့်ရှေ့မှာ တခြားလူမျိုးခြားတွေကို ခွဲခြား ဆက်ဆံတာ၊ နှိမ့်ချ ဆက်ဆံတာတွေ လုပ်လာတဲ့ အခါကိုယ်က လက်မခံကြောင်း မပြသဘဲ “သြော်…သူ့မှာလည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ အမျိုးသားရေး အမြင်တွေ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ရှိနေလို့ ဖြစ်မှာပါလေ၊ အဲလိုခွဲခြားခြင်းက သူ့အတွက်တော့ အမှန်တရား ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ သူလည်း သူ့လူမျိုးသူ ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ ဖြစ်မှာပါလေ” လို့ တွေးပေးလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒီလို တွေးပေးလိုက်ခြင်းဟာ ထပ်တူ အဖြေလွှာ ၂ ခုကို မတူတဲ့အမှတ် တွေ ပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းဆရာလို ဖြစ်သွားမှာပါ။ အဲလိုတွေးပေးသူဟာ၊ ဒီမကောင်းတဲ့ အပြုအမူ တခုတည်းကိုပဲ ကိုယ့်အတွက်တော့ “မှား” တယ်။ တခြားသူအတွက်တော့ “မှန်” တယ်လို့ အဲဒီ့ တခြားသူရဲ့ အစွဲအလမ်း ရှုထောင့်ကနေ သွားတွေးပေးပြီး အမှန်အဖြစ် သတ်မှတ် နားလည် ပေးလိုက်လို့ပါပဲ။
တချို့သူတွေ ပြောတတ်ကြတာ ရှိပါတယ်။ ဟစ်တလာက ဂျူးလူမျိုးတွေကို သန်းနဲ့ချီပြီး သတ်ခဲ့တာဟာ ကြားလူတယောက် အမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် မှားပေမဲ့ သူ့လူမျိုးတွေ အသာစီးရဖို့အတွက် လူမျိုးခြားတွေကို သတ်တာမို့ သူတို့ ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် မှန်တယ် လို့ တချို့က ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ double standard ပါ။ စံနှုန်းနှစ်မျိုးကို ကျင့်သုံးနေခြင်းပါ။ တကယ်တော့ ဓမ္မဆိုတာ “ဘက်” တွေ၊ အခြေအနေတွေ ကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲရိုး ထုံးစံမရှိပါ။
နောက်ထပ် ဥပမာ တခုပေးရရင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့်တွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးတာဟာ မှားယွင်းတယ်လို့ ခံယူသူတယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင်လည်း အမျိုးသမီးတွေ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိရေးကို အားပေးရမှာ ဖြစ်သလို၊ တခြား အစဉ်အလာတွေ အောက်က လူတချို့က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးလာရင်လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “သြော်…သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုအရပဲလေ၊ သူတို့ ဘာသာရေးအရ ပဲလေ” ဆိုပြီး နားလည်ပေးဖို့ မသင့်ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်း ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အစဉ်အလာတွေနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ မှားယွင်းမှုတွေကို သည်းမခံရဘူး ဆိုတာဟာ မတူတဲ့ အုပ်စုတွေကို တိုက်ခိုက်ရမယ်၊ ရန်ရှာရမယ်လို့ ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မှားယွင်းမှုတွေအပေါ်မှာ နှုတ်ဆိတ်မနေဘဲ တားသင့်တာတား၊ ဆွဲခေါ်သင့်တာတွေကို ဆွဲခေါ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးလာတာကတော့ အမှားတွေကို တုံ့ပြန်ရာမှာ စေတနာ ပါမပါနဲ့ တုံ့ပြန်ပုံ တုံ့ပြန်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တုံ့ပြန်တာနဲ့ ရန်ရှာလိုစိတ် သက်သက်နဲ့ တိုက်ခိုက်တာက အများကြီး ကွာပါတယ်။
ကောင်းကင်ကို Ref: (Andrew Pessin ၏ Intolerance isaVirtue ကို မှီငြမ်း ရေးဖွဲ့ပါသည်။)
Posted by Kaung Kin Ko at 2:19 PM2comments:
Labels: articles, အတွေး